2017ပြီလ3| 87 ၏စာမျက်နှာ 2020 | NAB သတင်းများ | XNUMX NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2017 » ဧပြီလ (စာမျက်နှာ 3)
အဆိုပါအများစုမှာအဆင့်မြင့် Stereoscopic, 360-ဘွဲ့, Pre-အမိန့်ရီနည်းပညာ, အဆင့်မြင့်, အသိဉာဏ်ပုံရိပ်နည်းပညာများ၏ဦးဆောင်, နိုင်ငံတကာပံ့ပိုးပေးသည် Now ကိုရရှိနိုင်သော Professional ကဖန်တီးရှင်များနှင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်များအတွက် Virtual Reality ဤနေရာသို့သွားရန်ကင်မရာ, ယနေ့ရီရောင်ခြည်တော်စက်ဝန်းတစ်ဦးကိုနောက်မျိုးဆက် virtual reality ထုတ်ဖော်ပြသ Google ရဲ့ဤနေရာသို့သွားရန်နည်းပညာဖြင့်တည်ဆောက် (VR) ကင်မရာ။ Yi ရောင်ခြည်တော်စက်ဝန်းပင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် VR ဖန်တီးသူ 'နှင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး' 'အရှိဆုံးစိန်ခေါ်မှုတောင်းဆိုချက်များကိုတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အဆိုပါပေါင်းစပ်ပြီး by ...
"ငါသည်အချိန်ကိုပြန်ဖွင့်နိုင်ပါလျှင်": DoJ နဲ့ In-အိမ်ယူနစ်
ဘရိုင်ယန်ကိုဆွဲငင်ခြင်းဖြင့် 2017 NAB ပြရန်အယ်ဒီတာ့အာဘော်တင်ပြမှုကိုကြော်ငြာအေဂျင်စီ In-အိမ်သူအိမ်သားထုတ်လုပ်မှု / post ကိုယူနစ်သို့ DoJ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏သတင်းမကြာသေးမီကကြီးတွေသတင်းဖြစ်ပါသည် - မကြားဘူးသောသူတို့အဘို့, ဒုက္ခကြော်ငြာအေဂျင်စီစွပ်စွဲရောင်းချသူထံမှစစ်ဆေးမှုများလေလံစုဆောင်းနေကြသည်ကြောင်း သူတို့အိမ်၌-In သို့မဟုတ် In-ကွန်ယက်ကိုအုပ်စုများမှတဆင့်သူတို့ကို undercut နိုင်ရန်အတွက်။ သင်တန်း၏အေဂျင်စီများ သာ. ကြီးထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိ ...
"ဒါဝိဒ်က, ငါမကြာခဏ ... လူသားတွေ၏ငြူစူခြင်းတစ်မျိုးခံစားခဲ့ရစင်စစ်, လူသားတွေတည်ရှိမှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမှတံခါးသော့ကိုဖွစျရမညျ။ " - အထူးကု (mecha ပြောင်းလဲ), "AI အ Artificial Intelligence" Warner Bros. , 2001 အခြားနေ့က ငါတစ်ခုခုရရန်မိသားစုကအခန်းသို့ ဝင်. ဒါငါ Alexa, ငါကဒီမှာဘာလာခဲ့ပါဘူး "ဟုမေးခဲ့သောအရာကိုမေ့ ...
ရာထူး: အသံအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ: BedRoc မှတ်တမ်းတည်နေရာ: တောင်ပေါ်က Vernon နယူးယော့အမေရိကန်လိုအပ်ချက်များ: ယုတ္တိဗေဒ 1 + ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူ9တစ်နှစ်တာအတွေ့အကြုံကျွမ်းကျင်မှု Protools HD ကို 8 + တာဝန်များနှင့်အတူ: 1) ကွန်ဖရထုတ်လုပ်သူများ, အဆိုတော်နှင့်အခြားသူများနှင့်အတူများအတွက်ဆန္ဒရှိသံကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်အောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ ထိုကဲ့သို့သောဂီတမှတ်တမ်းတင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်အဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုသည်။ 2) Mix များနှင့်ပြင်ဆင်ရန်အသံ, ဂီတ, နှင့် taped ...
အသံအင်ဂျင်နီယာချုပ် - Temp
ရာထူး: အသံအင်ဂျင်နီယာချုပ် - Temp ကုမ္ပဏီ: Blizzard Entertainment ကတည်နေရာ: အမေရိကန် Blizzard Entertainment ရဲ့အသံဦးစီးဌာနအမျိုးမျိုးသော Blizzard Entertainment ကဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့တစ်ခုခြွင်းချက်အသံအင်ဂျင်နီယာချုပ်ရှာဖွေနေသည် Irvine, CA ။ အဆိုပါစံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းကျယ်ပြန့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသံကိုရောစပ်နှင့်အတူအတွေ့အကြုံကိုအဖြစ် post ကိုထုတ်လုပ်မှုအယ်ဒီတာအဖွဲ့နှင့်ရောစပ်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါသံကိုအင်ဂျင်နီယာအမျိုးမျိုးသောဌာနများနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် ...
Las Vegas မှအတွင်း 26 NAB Show မှာနိုင်းမြစ်, မကျန်းမမာ။ ဧပြီလ 2017, 2017-ယနေ့, Shure ယင်း၏Axient®ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြိုးမဲ့စနစ်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ Shure ရဲ့အောင်မြင်သောအစုစုအတွက်အသစ်ကဝန်ကြီးချုပ်ကြိုးမဲ့ဖြေရှင်းချက်အဖြစ်, Axient ဒစ်ဂျစ်တယ်အားလုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဏ်ဍာအဘို့အကိုက်ညီ, ယနေ့အထိအရှိဆုံးအဆင့်မြင့်ကြိုးမဲ့ပလက်ဖောင်းဖန်တီးရန်ကုမ္ပဏီရဲ့လှိုင်းနှုန်းသည် UHF-R®, ULX-D®နှင့် Axient ကြိုးမဲ့စနစ်များ၏သာလွန်အကျိုးကျေးဇူးများကိုပေါ်တည်ဆောက် ...
San Jose, ကာလီဖိုးနီးယား - ဧပြီလ 22, 2017 - သဟဇာတ (NASDAQ: HLIT) ။ , ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေအခြေခံအဆောက်အအုံအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်ကသဟဇာတရဲ့ရန်၎င်း၏စျေးကွက်-ဦးဆောင် Spectrum (TM) မီဒီယာ server ကိုမှအအစွမ်းထက်ထုတ်လွှင့်ပလေးအောက်ကိုစွမ်းရည်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် VOS ဝန်ဆောင်မှု (SaaS) ဖြေရှင်းချက်အဖြစ် (TM) တိမ်တိုက်မီဒီယာအပြောင်းအလဲနဲ့ပလက်ဖောင်းနှင့် VOS 360 မိုဃ်းတိမ်ကိုမီဒီယာအပြောင်းအလဲနဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ။ VOS နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အသစ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ...
San Jose, ကာလီဖိုးနီးယား - ဧပြီလ 22, 2017 - သဟဇာတ (NASDAQ: HLIT) ။ , ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေအခြေခံအဆောက်အအုံအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်, ယနေ့ဗီဒီယိုအားစနစ်က VS က၎င်း၏ Electra (TM) PCCW Global, HKT ၏နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဌာနခွဲကအသုံးပြုကြောင်းကြေညာခဲ့သည် ဟောင်ကောင်ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေး, စွဲငြိဖွယ်ရာကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ, 360 ဒီဂရီ virtual reality (VR) အတွေ့အကြုံများကိုအဆိုပါ 2017 Cathay ပစိဖိတ် / HSBC ကဟောင်ကောင်ခုနစ်ယောက်အဖွဲ့အတွင်းမှာအသက်ရှင်နေထိုင် ...
3 ၏စာမျက်နှာ 87«12345 » 102030...နောက်ဆုံး»